रणवीर कपूरसँगको बिछोडको पीडा ‘जीरो’मा पोखिकी हुन् त कट्रिनाले ? – AP Khabar
रणवीर कपूरसँगको बिछोडको पीडा ‘जीरो’मा पोखिकी हुन् त कट्रिनाले ?
१० पुष २०७५, मंगलवार ०७:३४ 2018-12-25 एपी खबरLeaveaComment on रणवीर कपूरसँगको बिछोडको पीडा ‘जीरो’मा पोखिकी हुन् त कट्रिनाले ?
पुष १० : शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा र कट्रिना केफ अभिनित फिल्म ‘जिरो’ प्रदर्शनमा आइसकेको छ । फिल्ममा अभिनेता शाहरुख खान बउवा सिंह नामको एक यस्तो यूवकको भूमिकामा देखिएका छन् जो आफ्नो होचो पनका कारण जिन्दगीमा हण्डर र ठक्कर खाइरहेको हुन्छ । तर उसको हँसिलो स्वभावका कारण जीन्दगीमा रमाउन र अरुलाई हँसाइरहेको हुन्छ ।
उनी त्यसबेला नमज्जासँग टुटेकी थिइन् । आफूले रणबिर कपूरको प्रेममा हुँदा परिवार र सन्तानबारेमा सपना सजाएको कुरा कट्रिना स्वयमले फिल्म ‘जीरो’ को एक प्रमोशनको एक कार्यक्रममा बताएकी छिन् ।
फिल्म ‘जीरो’मा समेत एक यस्तो मोड आउछ जहाँ कट्रिना (बबिता कुमारी) को मन अभिनेता अभय देवल (फिल्ममा आदित्य कपूर) ले तोडिदिन्छन् ।
‘जीरो’को खराब प्रदर्शनपछि ‘डन ३’ को काम सुरु गर्दै शाहरुख
बेहुली मण्डपमै कुटिइन् !
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०२:५६ 2019-02-15 एपी खबर
२२ माघ २०७६, बुधबार ०८:०७ 2020-02-05 AP Khabar